Matipi mashanu Ekubata NeveMedia Senge Nyanzvi Kunobva | Martech Zone
NeChishanu, Nyamavhuvhu 21, 2020 NeChishanu, Nyamavhuvhu 21, 2020 Ron Ndarama
TV uye anodhinda vatori venhau bvunzurudza nyanzvi pamhando dzese dzenyaya, kubva pamagadzirirwo ehofisi yekumba kuenda kunzira dzakanakisa dzekuchengeta pamudyandigere Seyenyanzvi mumunda mako, unogona kudaidzwa kuti utore chikamu muchikamu chekutepfenyura kana kuprinta chinyorwa, inogona kunge iri nzira huru yekuvaka chiratidzo chako uye nekugovana meseji yakanaka nezve yako kambani Heano matipi mashanu ekuona yakanaka, inobudirira midhiya ruzivo.
Kana Iyo Media Inodaidza, Pindura
Kana iwe uine mukana wekubvunzurudzwa paTV kana muchinyorwa, donhedza chero zvauri kuita. Semukuru, rimwe remabasa ako akakosha kuve nechokwadi chekuti kambani yako inowana yakanaka yekudhinda. Nhengo dzezvenhau dzinogona kufona nyore nyore kune mumwe wevanokwikwidza, saka pavanosarudza kukufonera, tora mukana wekutora zita rekambani yako uye meseji kunze uko.
Pindura nenzira yakakodzera uye uzviite unowanikwa. Kana iwe uchishandira pamwe uye uchiwanika, zvinogona kuve kutanga kwehukama hurefu uye hunobatsira. Ipa mutori wenhau nhamba yako yefoni uye muudze kuti anogona kutaura newe chero nguva.
Ronga Zvaunoda Kutaura Uye Kuti Uchazvitaura Sei
Iva nehurongwa hwakazara hweizvo iwe zvaunoda kuyambuka mune chero midhiya kubvunzurudzwa. Mutori wenhau ane zvaanovavarira: Anoda kupa vateereri vake chinyorwa chinonakidza, chinodzidzisa. Asi iwe zvakare une ajenda: kutaurirana yakanaka meseji nezve yako kambani. Iwe unoda kupindura mibvunzo yemutori wenhau, asi ziva maitiro ekukwira.
Iti mutori wenhau arikuita chikamu cheTV pahutano hwembwa, aine mazano anobatsira nezvekuti vanhu vanogona sei kuona imbwa yavo iine hutano. Anogona kubvunzurudza imbwa inobereka matipi. Mucherechedzi anogona kugovana hunyanzvi hwake hwekuchengeta imbwa dzakagwinya, uku achitauriranawo kuti anga ari mubatsiri anobudirira kwemakore makumi maviri nemashanu uye kuti anoisa rudo rwakawanda nesimba mukugadzira mbwanana dzine hutano, dzinofara.
Ziva Zvaunoziva, Uye Izvo Zvausingazive
Sa CEO wekambani yako, iwe unofanirwa kuita yakawanda yemabvunzurudzo enhau. Iwe unonzwisisa mufananidzo wekambani yako zvirinani kupfuura chero munhu, uye ndiwe chiso chesangano. Asi dzimwe nguva kune vanhu mukati mesangano rako vane ruzivo rwakanyanya rwechimwe chidzidzo. Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti kunyangwe iwe uchigona kuve nyanzvi pazvinhu zvakawanda, hausi nyanzvi pane zvese.
Iti kambani yako inoshambadza zvinovaka muviri uye mavitamini. Iwe unogona kuziva kuti ndechipi chimwe chezvigadzirwa zvako chakanyanya kukudzwa uye vatengesi vakuru, asi iwe unogona kunge usiri kuziva sainzi chaiyo kuseri kwechigadzirwa chose. Saka kana kubvunzurudzwa kuri pamusoro pekuti imwe yekuwedzera inoshanda sei, zvingave zvakanaka kubata nyanzvi yesainzi inoshanda pane icho chigadzirwa mutsetse kuti iite bvunzurudzo. Tsvaga vanhu vakasiyana vane nzvimbo dzakasiyana dzehunyanzvi musangano rako, uye vagadzirire pamberi pekutaura kune vezvenhau.
Pane imwe tsamba inoenderana, kana mutori wenhau akakubvunza mubvunzo wausingazive mhinduro yacho, unogona kufunga kuti ndiko kunyara kwekupedzisira. Asi usazvidya moyo: Hapana chakaipa nekutaura kumutori wenhau:
Ndiwo mubvunzo wakanaka, uye ini ndoda kuita tsvagiridzo kuti ndiwane mhinduro yakanaka. Ndingadzokera kwauri gare gare nhasi?
Uye usafungidzira pamhinduro. Uye paunodzokera kumutori wenhau, ive shuwa yekuisa mhinduro nemazwi ako. Usadaro, semuenzaniso, cheka uye unama mazwi kubva kuchinyorwa chepepanhau kana webhusaiti uye utumire email kune mutori wenhau. Chero mibvunzo yakabvunzwa inofanirwa kupindurwa neruzivo rwako - kunyangwe kana uchifanira kutsvagisa kuti uwane iyo zivo.
Gara uchibata vatori venhau neruremekedzo. Bvuma zita remunyori, kungave kuri muTV, nhare kana kubvunzurudzwa kwewebhu.
Iva netsika uye zvakanaka. Taura zvinhu senge "Ndiwo mubvunzo wakanaka" uye "Maita basa nekundisanganisira."
Kunyangwe iwe uchifunga kuti mubvunzo hauna musoro, usaite kuti mutori wenhau anzwe kupusa. Usati, "Sei wandibvunza izvozvo?" Iwe hauzive kuti mutori wenhau anozokwanisa sei kutora mhinduro dzako uye kuumbiridza iwo ruzivo kuita nyaya.
Usapikise mutori wenhau, kunyanya kana uri mumhepo. Ramba uchifunga kuti kana iwe uri asina kunaka uye hasha, iyo nyaya inosangana neyakaipa toni.
Uye kana iwe ukataura pasi kumutori wenhau, achatarisa kumwe kunotevera nguva inotevera paanoda nyanzvi mumunda mako.
Kana iwe uri kubvunzurudzwa pane kamera, isa imwe pfungwa mune yako chitarisiko. Varume, kana wakapfeka sutu, bhatani bhachi; inotaridzika kunge nyanzvi. Panzvimbo yesutu, hembe yegorofu ine logo yekambani yako yakanaka sarudzo. Kunyemwerera kana iwe uchitaura uye usatsvete.
Ehezve, kubvunzurudzwa kwakawanda nhasi kuri kuitwa pamusoro peZoom kana tekinoroji yakafanana. Ive neshuwa yekupfeka zvine hunyanzvi (zvirinani kubva muchiuno kumusoro), uye uteerere kune iyo yekuvhenekesa uye neako kumashure. Panzvimbo pekusagadzikana zvisina kurongeka, inofadza, yakashambidzika kumashure - pamwe nekambani yako logo yakaratidzirwa zvakanyanya - zvinobatsira kukuratidza iwe nekambani yako muchiedza chiri nani.
Kana iwe uine mibvunzo nezve kubata nezvenhau, tizivise. Seyakazara-sevhisi kushambadzira uye neruzhinji hukama hukama, Kushambadzira Kunoshanda inopa vezvenhau kudzidziswa pamwe nemamwe akawanda masevhisi.
Tags: nyanzvi sosikubvunzurudzwa kwenhauonline kubvunzurudzwadzvanyahurukuro yehukama neruzhinjiZoom
Ron Gold ndiye purezidhendi uye CEO weKushambadzira Mabasa, yakazara-sevhisi hukama hweveruzhinji uye yekushambadzira yakasimba inogara muEast Setauket, NY Iye zvakare ndiye muvambi uye mubatiri weboka weiyo Iyo Isingabatsiri Izwi redhiyo show pa 103.9 FM LI News Radio.
MQLs Ndiko Kupasa - Uri Kugadzira MQMs?